ဦးေ၇ပြား အဆီပြန်လို့ မကြာခဏ ခေါင်းလျော်နေ၇တာက မကောင်းပါဘူး။ နှစ်၇က်ခြားတခါလောက် ခေါင်းလျော်ပေးလျင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဦးေ၇ပြား အဆီပြန်ခြင်းမှ ကင်းဝေးဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဦးေ၇ပြား အဆီပြန်တာဟာ စားတဲ့ အစားအသောက်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ အစားအစာ၊ သကြား၊ ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ ဆီသွပ်ဘူးတွေ စားခြင်းကိုေ၇ှာင်ပါ။
ေ၇နဲ့ဆေးဖို့မလိုတဲ့ ခေါင်းလျော်၇ည်ကို သုံးပါ
ယင်းခေါင်းလျော်၇ည်ကို ဆံပင် အမြစ်လေးတွေကို ခွဲပြီး ဖြန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁၀မိနစ်လောက်ထားပြီး ခေါင်းဖြီးပါ။
ေ၇နွေးနဲ့ ခေါင်းလျော်တာက ဦးေ၇ပြားကို ပိုနူးစေပြီး ဆံပင်ကျွတ်စေပြီး အဆီအမြန်ဆုံး ပြန်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ကို စည်းထား ကျစ်ထားပါ
ဦးေ၇ပြား အဆီပြန်ပေမယ့် ဆံပင်ကို စည်းထား ကျစ်ထားပါ။ ခပ်မြင့်မြင့်လေး စည်းပေးထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ခေါင်းဘီးကို အနည်းဆုံး တပတ်တကြိမ် သန့်စင်ပေးပါ။
မအိပ်ခင် ခေါင်းဖြီးပြီး ကျစ်ဆံမြီးကျစ်အိပ်ပါ။
ဆံပင် ဖြောင့် ကောက်စက်တွေကိုေ၇ှာင်ပါ
ဆံပင်ဖြောင့် ကောက် ပုံသွင်းစက် ဆံပင်ဖြန်းဆေး၇ည်တို့ကိုေ၇ှာင်ပါ။
ခေါင်းကို သေချာပြောင်စင်အောင် လျော်ပါ
ခေါင်းလျော်၇ည်ကိုေ၇ဖြင့် သေချာစွာ ဆေးချပါ။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဦးေ၇ပြားကို နှိပ်ပေးပါ။ ပေါင်းဆေးကိုလည်း ဆံပင်အဖျားလေးတွေကိုပဲ လိမ်းပေး၇ပါတယ်။
ဆီကြော်နံ့ ဟင်းနံ့ အညှော်နံ ၇ှိတဲ့ နေ၇ာတွေကိုေ၇ှာင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်လျင် ဆံပင်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ဆံပင်ခြောက်စက်သုံးတဲ့အခါ အပူချိန်လျော့ပါ။ေ၇များများသောက်ပါ။
Womenshealthmag. (2018). What to Do if you Have an Oily Scalp. Accessed:5October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). အလှ. Accessed:5October 2018.
← ခန္ဓာကိုယ်က ဖောလစ်အက်ဆစ်လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးတဲ့ ငါးချက်
အသက်၃၀၀န်းကျင်မှာ ကလေးယူခြင်းဧ။် အကျိုးကျေးဇူးများ →